မကျြစိအမွငျအာရုံ အားကောငျးစမေယျ့ နညျးလမျး (၁၀) ခု
HomeKnowledgeမကျြစိအမွငျအာရုံ အားကောငျးစမေယျ့ နညျးလမျး (၁၀) ခု
ဆေးပညာအရ မကျြလုံးကွှကျသားတှကေို အသုံးမပွုရငျ အားနညျးလာပါတယျ။ မကျြလုံးကွှကျသားတှေ အားကောငျးလာဖို့ဆိုရငျ ဒီအခကျြလေးတှကေို မမပေ့ါနဲ့နျော။
1. မကျြလုံးကို တဈနကေုနျ အသုံးမပွုပါနဲ့။2နာရီ၊3နာရီကွာ အလုပျလုပျပွီးရငျ မိနဈအနညျးငယျကွာ မကျြစိမှိတျပွီး အနားယူပါ။
2. မကျြလုံးကွှကျသားတှေ အားကောငျးဖို့အတှကျ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးလေးကို ပွုလုပျပေးလို့ ရပါတယျ။ မွားလေးတှေ သှားရာကို လိုကျကွညျ့ပေးရမှာပါ။ အကှကျလေး 16 ကှကျကို အစဉျအတိုငျး တဈနတေ့ဈခါကွညျ့ပေးရငျ ရပါပွီ။
3. သငျက မကျြမှနျတပျသူဆိုရငျ မကျြမှနျတပျတဲ့ အခြိနျတှကေို လြှော့ခလြိုကျပါ။ တတျနိုငျသမြှ မကျြမှနျမတပျဘဲ နပေါ။
4. ပုံမှာပါတဲ့ အစကျလေးတှအေတိုငျး လကျညှိုးနဲ့လကျခလယျကို သုံးပွီး မကျြလုံးကို နှိပျနယျပေးပါ။ မကျြစိညောငျးတာ သကျသာစပေါတယျ။
5. သငျအပွငျထှကျပွီဆိုရငျ အပငျစိမျးစိမျးစိုစိုလေးတှကေို မိနဈအနညျးငယျကွာ ငေးကွညျ့ပေးပါ။
6. ခါကွကျဥဖြျောရညျကို တတျနိုငျသမြှ မြားမြားသောကျပေးပါ။ နတေို့ငျးသောကျနိုငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ခါကွကျဥဖြျောရညျထဲကို သံလှငျဆီထညျ့ရငျ ပိုပွီးအာနိသငျရှိပါတယျ။အရသာမပြောကျသှားပါဘူး။
7. မကျြလုံးတှကေ ညနဘေကျမှာ ကြိနျးစပျလာပွီဆိုစကျ နစေ့ဉျသုံးနကြေ မကျြစဉျးဆေးအစား ရှားစောငျးလကျပတျအရညျကို မကျြလုံးမှာခတျပေးပါ။ ဒါပမေယျ့ ရှားစောငျးလတျပတျကို မသုံးခငျ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျသငျ့ပါတယျ။
8. မကျြလုံးတှညေောငျးလာပွီဆိုရငျ ရနှေေးနဲ့ မကျြနှာသဈပါ။
9. အိပျယာမဝငျခငျ2နာရီအလိုမှာ TV၊ ကှနျပွူတာ၊ ဖုနျးမသုံးဘဲ နကွေညျ့ပါ။
10. မကျြလုံးအတှကျ အိန်ဒိယ တရာတာကာ လကေ့ငျြ့ခနျးကို ပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးက မကျြလုံးစူးစိုကျအား ကောငျးစပွေီး စိတျကို တညျငွိမျစပေါတယျ။ နရောလှတျတဈခုမှာ ဖယောငျးတိုငျလိုမြိုးအရာတဈခုကို ထားပွီး အာရုံစူးစိုကျကွညျ့ပါ။ မကျြတောငျမခတျရပါဘူးနျော။ ဖယောငျးတိုငျရဲ့ အသှငျသဏ်ဍာနျကို မှတျဉာဏျထဲမှာ အသေးစိတျ မှတျမိနအေောငျ ကွညျ့ရမှာပါ။
ပွီးတော့ မကျြလုံးကို ခဏလောကျမှိတျလိုကျပါ။ မကျြလုံးပွနျဖှငျ့ပွီး ဘာမှ မရှိတဲ့နရောလှတျကို စူးစိုကျကွညျ့ပါ။ ပွီးတော့ ဖယောငျးတိုငျရဲ့အသှငျသဏ်ဍာနျကို မှတျမိသလောကျ ပုံဖျောကွညျ့ပါ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးရဲ့ရညျရှယျခကျြက မကျြစိအာရုံ ကွညျလငျသှားစဖေို့ဖွဈပါတယျ။
မျက်စိအမြင်အာရုံ အားကောင်းစေမယ့် နည်းလမ်း (၁၀) ခု
ဆေးပညာအရ မျက်လုံးကြွက်သားတွေကို အသုံးမပြုရင် အားနည်းလာပါတယ်။ မျက်လုံးကြွက်သားတွေ အားကောင်းလာဖို့ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို မမေ့ပါနဲ့နော်။
1. မျက်လုံးကို တစ်နေကုန် အသုံးမပြုပါနဲ့။2နာရီ၊3နာရီကြာ အလုပ်လုပ်ပြီးရင် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ မျက်စိမှိတ်ပြီး အနားယူပါ။
2. မျက်လုံးကြွက်သားတွေ အားကောင်းဖို့အတွက် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကို ပြုလုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ မြားလေးတွေ သွားရာကို လိုက်ကြည့်ပေးရမှာပါ။ အကွက်လေး 16 ကွက်ကို အစဉ်အတိုင်း တစ်နေ့တစ်ခါကြည့်ပေးရင် ရပါပြီ။
3. သင်က မျက်မှန်တပ်သူဆိုရင် မျက်မှန်တပ်တဲ့ အချိန်တွေကို လျှော့ချလိုက်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ မျက်မှန်မတပ်ဘဲ နေပါ။
4. ပုံမှာပါတဲ့ အစက်လေးတွေအတိုင်း လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ကို သုံးပြီး မျက်လုံးကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။ မျက်စိညောင်းတာ သက်သာစေပါတယ်။
5. သင်အပြင်ထွက်ပြီဆိုရင် အပင်စိမ်းစိမ်းစိုစိုလေးတွေကို မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ ငေးကြည့်ပေးပါ။
6. ခါကြက်ဥဖျော်ရည်ကို တတ်နိုင်သမျှ များများသောက်ပေးပါ။ နေ့တိုင်းသောက်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ခါကြက်ဥဖျော်ရည်ထဲကို သံလွင်ဆီထည့်ရင် ပိုပြီးအာနိသင်ရှိပါတယ်။အရသာမပျောက်သွားပါဘူး။
7. မျက်လုံးတွေက ညနေဘက်မှာ ကျိန်းစပ်လာပြီဆိုစက် နေ့စဉ်သုံးနေကျ မျက်စဉ်းဆေးအစား ရှားစောင်းလက်ပတ်အရည်ကို မျက်လုံးမှာခတ်ပေးပါ။ ဒါပေမယ့် ရှားစောင်းလတ်ပတ်ကို မသုံးခင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
8. မျက်လုံးတွေညောင်းလာပြီဆိုရင် ရေနွေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။
9. အိပ်ယာမဝင်ခင်2နာရီအလိုမှာ TV၊ ကွန်ပြူတာ၊ ဖုန်းမသုံးဘဲ နေကြည့်ပါ။
10. မျက်လုံးအတွက် အိန္ဒိယ တရာတာကာ လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက မျက်လုံးစူးစိုက်အား ကောင်းစေပြီး စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေပါတယ်။ နေရာလွတ်တစ်ခုမှာ ဖယောင်းတိုင်လိုမျိုးအရာတစ်ခုကို ထားပြီး အာရုံစူးစိုက်ကြည့်ပါ။ မျက်တောင်မခတ်ရပါဘူးနော်။ ဖယောင်းတိုင်ရဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်ကို မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ အသေးစိတ် မှတ်မိနေအောင် ကြည့်ရမှာပါ။
ပြီးတော့ မျက်လုံးကို ခဏလောက်မှိတ်လိုက်ပါ။ မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ပြီး ဘာမှ မရှိတဲ့နေရာလွတ်ကို စူးစိုက်ကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ ဖယောင်းတိုင်ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကို မှတ်မိသလောက် ပုံဖော်ကြည့်ပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က မျက်စိအာရုံ ကြည်လင်သွားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။